10 Daar ekayd In Italy waa in aad tagtaa | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Daar ekayd In Italy waa in aad tagtaa
Waxaa jira badan oo qalcado ekayd in Italy waa in aad tagtaa! Iyada oo muddo dheer sida a, taariikhda hodanka ah iyo dhaqanka, wadankan waa meesha si ay u tagaan, waayo, sahaminta iyo Daar wayn. Si aad u caawin qorsheeyo safarkaaga, halkan waa 10 Daar ekayd in Italy in aad dhab ahaan u socdaan in ay ku raaxeystaan:
Haddii aad tahay cajiib ah oo ku saabsan ku dhashay of Chianti ah khamri, tani waa meesha waa in aad u tagto. hantida qalcaddii Tani sprawls ka badan 3,000 acres, complete la canab iyo saytuun. Intaas waxaa sii dheer, waxaa gabi ahaanba waa qurux si ay u arkaan inta lagu jiro qorrax dhaca ah safar.
Buuraha quruxda badan ee Tuscany il-qabad this qarin qalcaddii la naqshadaha u gaar ah. Its milkiilaha qarnigii 19aad doonayo inuu dib-uhabeynta la saameynta Oriental. In si kale loo dhigo, ayuu qaaday oo siiyey, kartina u ah in aan qalcaddii kale Talyaani dhigma karaa.
Raadinta wax ka yara duwan? At qalcaddii this, aad ku raaxaysan karaan cararaan a nasto iyo ma ahan oo keliya quruxda naqshadaha iyo agagaarkeeda. Tan iyo 1700, qalcaddii this ayaa istaagay watch ka badan buuraha diidanaa ee degaanka iyo hadda uu yahay hotel la waxyaabaha badan.
Dhisay-in qarnigii 10-aad, Valenzano qalcaddii waa mid ka mid ah qalcado ekayd ugu da'da weyn ayaa weli taagan Italy. Maanta weli waa sidii araggiisu iyo haybad sida ay markaas ahaa. Si kastaba ha ahaatee, halkii adeegaya darbidda, qalcaddii hadda waa hotel a, complete la maxkamadaha tennis iyo koorsooyinka golf.
Tani story qalcaddii ekayd bilaabay in ka badan kun sano ka hor, iyo hantida ayaa ka mid ah ugu guulaysannaa is dhaafsadeen gacmaha marar badan tan. Si kastaba ha ahaatee, waa meel nabad ah maalmahan, la guryaha iyo beeraha canabka beeraha badan. Visitors jeclahay sababtoo ah taariikhda xiiso iyo naqshadaha cajiib ah.
Waxaa jira legend xiiso leh oo ku saabsan mid ka mid ah munaaradaha ay. Sida dadka deegaanka ku odhan, waa meesha nasasiiyay of mid ka mid ah milkiilayaasha ay hore. ayaa lagu soo waramayaa, iyadu loo isticmaalaa in lagu xiri nimanka booqanaya in munaarad in isla, Dadka oo kaga cadhaysiiyeen. Si kastaba ha ahaatee, Halyeeyga ma aha waxa kaliya ee soo jiidashada kooxda martida ah. views qurux badan dooxooyinka ku xeeran qalcaddii ayaa safar u qalantaa.
Tani qalcaddii raadinaya sanayd ee bixisaa views cajiib ah iyo fursad aad u fiican inaad wax ka barato Architecture-ka mid ah Renaissance muddo. Intaas waxaa sii dheer, waa mid ka mid kale oo ka mid ah jirka kun oo sano ka mid qalcado Talyaani. Tani qalcaddii ekayd ku dhow yahay inuu Florence, iyo waa weyn u safrayaan maalin halkaas ka.
Cabbiavoli Castle waxaa laga yaabaa in image ugu fiican ee qalcaddii ah Tuscan. Iyada oo ay muuqaalka quruxda badan, beeraha, canab ah, iyo beerihiinna saytuunka ah, qalcaddii this si fudud ku wada leeyahay. xataa Waxaad tegi kartaa saaran faras marka aad halkaas booqo!
9. bakeerigaagu Castle
Mid ka mid ah iyo Daar wayn ugu cajiib ah oo dhan ee Italy waxaa Shaad Hadddaba on cliffside a. Hirarka oo ka mid ah nasashada Badda Mediterranean, dhagaxyada dushoodana, oo qalcaddii this yari korkooda. ma awoodi doontid inaad si loogu meero gudaha, laakiin qalcaddii weli fiican ee sawirada.
Maxaa yeelay, dhammaan kuwii ku caashaqi jiray fanka dhex Socdaalba, Montegufoni noqon doonaa meel soo jiidasho leh. Waa guriga of Room caanka ah ee-gashiga, oo ay ku jiraan Gino Severini frescoes qurxoon. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay u muuqataa gabi ahaanba cajiib ah, oo waa meel in qof kasta ku raaxaysan karaan.
Diyaar u ah inay soo aragto qalcado ekayd in Italy? Hubi in ay qorsheeyaan aad fasax iyo Ballansan Your Tigidhada in Tareenku waqtiga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Daar ekayd In Italy waa in aad tagtaa” gal your site? aad sidoo kale sawiro iyo qoraal, laakiin waxay qaadan kartaa fadlan, kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Sheeko cirfiid #traveleurope Qalcado europetravel hawlgalin Talooyin safarka tareenka travelitaly